काठमाडौं, २२ चैत । शुक्रबार गण्डकी सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा देशमा कुल संक्रमित संख्या ७ लेख्यो । तर पछि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई गलत भन्यो । यसबारे समाचार लेख्ने मिडियाहरुले विश्वस्नीयता गुमाएको जस्तो भयो ।
यस्तो किन भयो ? किनकी सरकारले खरिद गरेर ल्याएको परीक्षण गर्ने किटको गुणस्तर नै त्यस्तै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा ती उपकरणहरुको योग्यता परीक्षण गर्नसपर्छ सुरुमा ।
अहिलेसम्म हाम्रोमा १३५६ जनाको नमूना परीक्षण भएको छ । यही दरमा परीक्षण गर्दै जाने हो भने नेपालमा एक लाख मानिसको नमूना परीक्षण गर्नुपर्‍यो भने वर्षौं लाग्छ । जतिबेलासम्म कोरोना महामारीले ठूलो क्षति भइसकेको हुनसक्छ ।
‘परीक्षण नगरे कोरोना नै देखिँदैन, बिस्तारै परीक्षण गरे कम संक्रमिट भेटिन्छ, छिटो परीक्षण गर्ने क्षमता विस्तार गरे धेरै कोरोना रोगी भेटिन्छन् ।’ यो अनुभव कोरोनालाई समयमै नियन्त्रणमा लिएका देशहरुको अनुभव हो । शुक्रबार बिल गेट्सले अमेरिकाबाट यही शिक्षालाई जोड दिएका छन् ।
दक्षिण कोरियाको जनसंख्या ५.१ करोड हो । त्यहाँ ४.३१ लाख नमूना परिक्षण गरिएको थियो । कोरोनाको परीक्षण र नियन्त्रणमा दक्षिणी कोरियाली मोडल संसारमै उत्कृष्ठ मान्न थालिएको हो ।
नेपालमा कोरोना परीक्षणको लागि प्रदेश स्तरीय प्रयोगशालाले खासै काम गर्न सकेका छैनन् । यस्तो बेला सामान खरिदको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । सत्तापक्षलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ र गतिलो जवाफ दिन नसक्नुका साथै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरिएको छ ।
किनिएका सामानहरुको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्न थालिएको छ । कम नमूना परीक्षणको दुश्परिणामको उदाहरण हो अमेरिका । त्यहाँ सुरुमा केल ३०० देखि ५०० नमूना मात्र परीक्षण गरियो । नमूना संकलनमा परीक्षणमा असाध्यै हेलचेक्र्याई गरिनुको परिणाम अमेरिकाले अहिले भोगिरहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै देशमा परीक्षणको मात्रा तीव्ररुपमा बढाएर कोरोना नियन्त्रण गर्न चेतावनी दिँदै आएको छ । जनसंख्याको अनुपातमा कोभिड-१९ को परीक्षण गर्दा संक्रमित पहिल्यै पत्ता लाग्छ र उसलाई आइसोलेसनमा राख्दा फैलने क्रम रोकिन्छ ।
जर्मनीमा संक्रमितको संख्या धेरै भए पनि मृत्यूदर एकदमै कम छ । संसारमा सबैभन्दा बढी परीक्षण जर्मनीमै गरिएको छ । त्यहाँ प्रति दश लाख जनसंख्यामा ११०९२ नमूना परीक्षण गरिएको छ ।
हाम्रो लागि सबैभन्दा खतरनाक कुरा भरपर्दोगरी परीक्षण हुने किट र उपकरण नहुनु हो ।
जनवरीको अन्तिममा अमेरिकामा केवल ११ जना संक्रमित भेटिएका थिए । १६ फेब्रुअरीसम्म त्यहाँ केवल ८०० परीक्षण गरिए । २९ फेब्रुअरीसम्म केस बढेर ५१८ पुगेको थियो, त्यतिबेला जम्मा ३०९९ परीक्षण मात्र गरिएको थियो ।
अहिले अमेरिकामा पौने तीन लाख मानिसमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । अहिले अमेरिकाले दैनिक १ लाख परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो समय उसले १२ लाख परीक्षण गरिसकेको छ ।
इटलीमा सुरुमा ६०० देखि एक हजारसम्म परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षण कम हुँदा रोगी मानिसले संक्रमण फैलाइरहे । इटलीमा अहिले सबैभन्दा बढी मृत्यू भएको छ । बेलायतमा प्रतिदिन १० हजार परीक्षण भइरहेको छ । अप्रिलको अन्तिमसम्म प्रतिदिन एक लाख परीक्षण गर्ने लक्ष्य त्यहाँ लिइएको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार शनिबारसम्म केवल १२५६ परीक्षण गरिएको छ । यो अत्यधिक निराशापूर्ण परीक्षण हो । यसले कोरोना संक्रमणको सम्भावित भयावह अवस्था संकेत गर्छ जुन अमेरिका र इटली लगायतका देशहरुले भोगिसकेका छन् ।
कुलमान र कानूनः अध्यक्षद्वयको कोपभाजन- वामदेवलाई बाटो, कुलमानलाई तगारो
चीनले यी ७ उपायले नियन्त्रण गर्‍यो कोभिड–१९
फेरि गोर्खाल्याण्डको आशा
यस्तो छ जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री सुगाको राजनीतिक यात्रा
किन भारतमा कोभिड–१९ नियन्त्रण बाहिर गयो ?
नेकपा विवादः मच्चियो मच्चियो थच्चियो
एक क्रान्तिकारी साधुः स्वामी अग्निवेश
प्रश्नैप्रश्नको घेरामा अख्तियार
कस्तो बनाउने राष्ट्रियसभा ? सम्मानित सदन कि हरुवाहरुको गफ गर्ने थलो ?
कंगना रनावत र महाराष्ट्र सरकारबीचको तनाव झनै चर्कियो
जो डोल्पामा उद्यमशिलताको उडान भरिरहेका छन् …
‘साउथ चाइना सी’ मा तनाव किन ?
चीनले ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’लाई ‘गल्ती’ मात्र होइन, अब ‘बर्बादीको युग’ भन्ने